Khelkudsansar.com | दिनेश र कमला स्ट्रङ्गेष्ट खेलाडी घोषित
दिनेश र कमला स्ट्रङ्गेष्ट खेलाडी घोषित
Posted on: September 14, 2017 | views: 271
काठमाडौं । नेपाली सेनाका दिनेश श्रेष्ठ र कमला श्रेष्ठ प्रथम स्ट्रङ्गेष्ट सुनिललाल जोशी स्मृती भारोत्तोलन प्रतियोगिताको स्ट्रङ्गेष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । उनीहरुले मेडल ट्रफी र नगद ११ हजार प्राप्त गरे । काठमाण्डौ जिल्ला भारोत्तोलन संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा महिला जुनियर तर्फ सेनाकी कमला श्रेष्ठ र सिनियर तर्फ सञ्जु श्रेष्ठ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
यस्तै पुरुष तर्फ जुनियरमा बाँकेका प्रकाश के.सी. र सिनियरम सेनाका ओलम्पियन कमलबहादुर अधिकारी घोषित भए । विजयी खेलाडीहरुले ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।प्रतियोगितामा राईजिङ्ग खेलाडी तर्फको उपाधी पुरुषमा कास्कीका किरण घर्ती मगरले र महिलामा पर्साकी रशिना बस्नेतले हात पार्न सफल भएका छन् । विजयी खेलाडीहरुले ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
प्रतियोगितामा राष्ट्रिय किर्तिमान कायम गर्न सफल खेलाडी द्वय सेनाकी कमला श्रेष्ठ र बाँकेकी सञ्जु श्रेष्ठले नगद १ हजार, ट्रफी र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । दक्षिण एशियाली खेलकुदका सर्वाधिक पदकधारी, ओलम्पियन तथा नेपाल भारोत्तोलन संघका उपाध्यक्ष सुनिललाल जोशीको स्मृतीमा आयोजित भारोत्तोलन प्रतियोगिताको पुरुष ६२ केजी तौल समूहको सिनियर तर्फ नेपाली सेनाका राजु चौधरीले स्नाचमा ८० केजी, क्लिन एण्ड जर्कमा ११० केजी भारका साथ कुलमा १९० केजी भार बहन गर्दै स्वर्ण पाए । दोश्रो भएका एपिएफका राहुल कुमार दासले ७०, ८३ र कुलमा १५३ केजी भार बहन गरे । तेश्रो स्थानमा रहेका एपिएफका सुभाष कुमार शाहले ६५, ८७ र कुलमा १५२ केजी भार बहन गरे ।
बालकुमारी ब्याङक्वेटमा भएको प्रतियोगिताको ६९ केजी तौलमा नेपाली सेनाका यज्ञबहादुर सारुले कुलमा २०० केजी भार बहन गर्दै स्वर्ण पदक पाए । उनले स्नाचमा ८५ र क्लिनमा ११५ केजी उचालेका थिए । एपिएफका महेश चौधरीले १७७ केजी भार बहन गर्दै रजत पाए । उनले स्नाचमा ८२ र क्लिनमा ९५ केजी उचाले । यस्तै सेनाकै जिवन तामाङ्गले कुलमा १६० केजी उचाल्दै कास्य पाए । उनले स्नाचमा ७० र क्लिनमा ९० केजी भार बहन गरे ।
यस्तै ७७ केजी तौलमा ओलम्पियन नेपाली सेनाका कमल बहादुर अधिकारीले स्वर्ण पाए । उनले स्नाचमा ११० केजी, क्लिनमा १५७ केजीका साथ कुलमा २६७ केजी भार बहन गरे । एपिएफका तिलक बहादुर थापाले रजत पाए । उनले ७०, ९२ र कुलमा १६२ केजी उचाले । पर्साका आकाश कुमार पटेलले कास्य पाए । उनले ५८, ६० र कुलमा ११८ केजी उचाले ।
पुरुषकै सिनियर तर्फको ८५ केजीमा २१७ केजीका साथ नेपाली सेनाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले स्वर्ण पदक हात पारे । उनले स्नाचमा ९७ र क्लिनमा १२० केजी भार बहन गरे । १९० केजीका साथ सेनाकै दिनेश कार्कीले रजत पाए । उनले ७५ र ११५ केजी भार बहन गरे । १४५ केजीका साथ एपिएफका सुजन बि.क.ले कास्य पाए । उनले ६३ र ८२ केजी भार बहन गरे ।
९४ केजीम नेपाली सेनाका टहल बहादुर बस्यालले २०७ केजीका साथ स्वर्ण, सेनाकै विनोद खड्काले १५७ केजीक साथ रजत र एपिएफका देवेन्द्र बि.क.ले १६६ केजीका साथ कास्य पाए ।
ओलम्पियन सुनिलाल जोशीको स्मृतीमा आयोजित प्रतियोगिताको १०५ केजीम सेनाका दिनेश श्रेष्ठले स्वर्ण पाए । उनले स्नाचमा ११० केजी र क्लिनमा १४८ केजी गरि कुल २५८ केजी भार उचाले । यस्तै १०५ केजी माथी सेनाकै पुकार गुरुङ्गले २५० केजीका साथ स्वर्ण पाए । गुरुङ्गले स्नाचमा ११५ र किल्नमा १३५ केजी उचाले ।
दुई दिने प्रतियोगिताको जुनियर ६२ केजीमा कुलमा १५० केजी भार बहनका साथ ललितपुरका गणेश रानाभाटले स्वर्ण, १४० केजीका साथ बाराका सरुद्धिन आलमले रजत र बाराकै अशोक शाहले १३० केजीक साथ कास्य पाए ।
६९ केजीमा बाँकेका प्रकाश के.सी.ले २१२ केजीका साथ स्वर्ण र बाराका धिरज यादवले ११५ केजीका साथ रजत पाए । ७७ केजीमा बाँकेका सुरज बैश्यले १६६ केजीका साथ स्वर्ण पाए । यस्तै ९४ केजीमा भक्तपुरका जयदीप कोजुले कुलमा १६० केजीका साथ स्वर्ण र १२५ केजीका साथ बर्दियाका रोशन बि.सी.ले रजत पाए । १०५ केजी तौल समूहमा कञ्चनपुरका सागर भण्डारीले २०३ केजीका साथ स्वर्ण पाए । उनले स्नाचमा ८५ र क्लिनमा ११८ केजी भार बहन गरे ।
बिजयी खेलाडीहरुलाई प्रमुख अतिथी युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजेन्द्र कुमार के.सी., स्व. सुनिललाल जोशीका श्रीमती, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जय बहादुर चन्द, खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष महेश महर्जन नेवालगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।